RASMI: Tottenham oo wareegga 16-ka Carabao Cup la ciyaari doonta Chelsea, inkastoo Spurs aysan dheelin wareeggii 32-ka Kooxood ee tartankan! – Gool FM
(London) 25 Sebt 2020. Kooxda Tottenham ayaa loo ogolaaday inay wareegga 16-ka Carabao Cup la ciyaarto naadiga Chelsea, inkastoo Spurs aysan ciyaarin wareeggii kaas ka horreeyey ee 32-koox.
Tottenham ayaa loo qoray inay ka soo gudubtay kooxda heerka hoose ee Leyton Orient inkastoo aysan labada kooxood wada ciayarin sida uu xaqiijiyey maamulka tartankan Carabao Cup.
Habeenkii Talaadada ayay ku ballansanaayeen labadan kooxood ee Tottenham iyo Leyton Orient inay wada ciyaaraan wareegga 32-ka kooxood ee Carabao Cup, laakiin xilli dambe ayaa go’aan lagu gaaray in la kansalo kulankaas kaddib markii tiro ka mid ah xiddigaha naadiga Leyton Orient laga helay caabuqa Korona Fayras.
Iyadoo la raacayo sharciga tartanka, islamarkaana jadwalka xilli ciyaareedka uu yahay mid ciriiri ah, Spurs ayaa haatan loo xugmiyey inay u soo gudubtay wareegga 16-ka ee Carabao Cup, iyadoo aan ciyaarin wareeggii kaas ka horreeyay.
Waxa ay kooxda Leyton filaysay in kulanka ay la lahaayeen Spurs dib loogu dhigi doono si ay u helaan 100-ka kun ee gini oo xuquuqda baahinta ah, laakiin taa bedelkeeda waa la wada kansalay, tababaraha kooxdaas ee Ross Embleton ayaana wax laga xumaado ku tilmaamay warkaaan.
Kooxda Tottenham ayaa soo dhoweyn doonta Chelsea todobaadka soo aaddan kulankan oo qeyb ka ah wareegga 16-ka Carabao Cup, xilli macallin Jose Mourinho uu baadi-goob ugu jiro inuu guushii ugu horreysay ka gaaro xiddigiisii hore ee Frank Lampard oo haatan macallin u ah Blues.
Yeelkeede, macallinka reer Portugal ee Mourinho ayaan la ogayn xiddigaha uu safi doono kulanka Chelsea, maadaama Tottenham ay Axadda la ciyaari doonto kooxda Newcastle United kulan ka tirsan horyaalka Premier League, isla markaana ay Khamiista la ciyaari doonaan Kooxda Maccabi Haifa kulan qeyb ka ah tartanka Europa League.